လက်ထပ်ထိမ်းမြားအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုမျာ | Apg29
Surfar nu: 799
: ပထမဦးဆုံးဘုရား, ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့နံနက်ယံ၌ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအကြားရှိအိမ်ထောင်ရေးကိုတည်ထောင် "သို့ဖြစ်. လူသည်မိမိမယားကိုသူ၏ဖခင်နှင့်မိခင်နှင့်၌မှီဝဲချန်ခြွင်းရမည်ကို၎င်း, သူတို့သားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။ " 1 ထှကျမွောကျရာ။ 2:24 ။
အနည်းဆုံး, ကလုံးဝသဘာဝအကြောင်းမဟုတ်မစဉ်းစားခရစ်ယာန်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမာရ်နတ်၏တိုက်ခိုက်မှုများအာရုံဖြစ်ကြ၏။ သူသည်ဘုရားသခင်၏ avsvurne ရန်သူအားလုံးယုံကြည်သူများပြိုင်ဘက်၏ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဤနောက်ဆုံးသောကာလ၌မှတဆင့်ကိုပြသနိုင်ဖို့အထူးနညျးလမျး၌ဤအလိုတော်။ ကျမ်းစာရဲ့နောက်ဆုံးစာအုပ်၌တွေ့တစ်ဦးပရောဖက်ပြုဖော်ပြချက်:
"ထိုမိန်းမသည်ဆန့်ကျင်သည်မိမိအမျက်ဒေါသခုနှစ်တွင်သူမ၏အမျိုးအနွယ်ကိုဘုရားသခငျ၏ပညတျတို့ကိုအားနာခံခြင်းနှင့်ယေရှုခရစ်တော်၏။ ၏သက်သေခံချက်ကိုကိုင်ထားသူမြား၏အကြွင်းအကျန်ကိုအတူစစ်တိုက်ခြင်းငှါပယ်ရှားစွန်သို့ သွား. " Up ကို။ 12:17 ။
ကျနော်တို့ဤသို့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကာလအတွက်ညီလေးပဋိညာဉ်တရားကိုလူမျိုး, ယုဒလူတို့, အဘယ်သူဓမ္မလူမျိုး, ခရစ်ယာန်တွေနှစ်ဦးစလုံးဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုများကိုရှိလိမ့်မည်ကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်ရွေးကောက်လူနှစ်ဦးဆန့်ကျင်သည်ဤတိုက်ခိုက်မှုများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အတွက်ပိုပြီးရှင်းလင်းပြတ်သားဖြစ်လာနေသည်။ ကိုသရုပ်တစ်ခုမှာမာရ်နတ်၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားဖကျြဆီးဖို့ကိုအသုံးပြုကိရိယာများအားဖြင့်ခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်အပေါ်ရုံတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလာပါတယ်။
ဆယ်ပါးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကျနော်တို့ကထိုကဲ့သို့သောအမှုဖော်ပြရန်နိုင်ကြောင်းနှင့် ပတ်သက်. အခြားအသက်သေခံချက်လည်းရှိပါတယ်။ သူမလေယာဉ်ဖြင့်ခရီးထွက်ကြသောအခါအဘယျသို့ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်. wrote တစ်ဦးသင်းအုပ်ဆရာရဲ့ဇနီးရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခဲ့သည်။ လာမယ့်တစ်ဦးသင်းအုပ်ဆရာရဲ့ဇနီးမှထိုင်လျက်အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည်သူမ fasts ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမအစာမရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ်သည့်အခါလေယာဉ်တွင်နေ့လယ်စာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ခရစ်ယာန်မိန်းမကဲ့သို့စိတ်ဝင်စားသူဖြစ်လာကြပြီးအချင်းချင်းပြောဆိုရန်စတင်ဖို့။ ထိုအခါသူမကခရစ်ယာန်အိမ်ထောင်ကျိုးပဲ့ပျက်စီးလိမ့်မည်ဟုညွှန်ကြားချက်ကိုအတူဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအစာရှောင်သောအခြားသောမိန်းမရှင်းပြပါ။ အခြားသူများ။ မာရ်နတ်သည်ကိုးကှယျသူ၌ဆုတောငျးလနှင့်ခရစ်ယာန်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြိုလဲသွားပြီဘို့အစာရှောငျမည်သို့ illuminated
နေချိန်မှာကျွန်တော်အမှတ် 2-2002 ရေးသားခဲ့သည်ဒါဟာ။
ဘုရားသခင့လည်းပရောဖက်ပြုသောဤတိုက်ခိုက်မှုများကိုသည်မိမိလူမျိုးသတိပေးထားပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားယနေ့ခေတ်တွင်မတ်လ9ကွာရှင်းခြင်းမှရှောင်ရှားရန်မိသားစုတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့အလုပ်လုပ် Lars Nylen, အဖွဲ့အစည်းကိုရှင်သန်နေသောမိသားစုများ၏ခေါင်းဆောင်, ရေးသားခဲ့သည်:
"တိုက်ရိုက်မိသားစုများတစ်ဦးပရောဖက်ပြုစကားလုံးပြီးနောက်အပါအဝင် 1997 ခုနှစ်တွင်၎င်း၏အလုပ်ကိုစတင်ခဲ့: 'det 7-8 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအကြောင်းမူကားဆွီဒင် kristenhet.` ကျော်ကှာရှငျးတဲ့လှိုင်းလုံးအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကမှာဘုရားသခငျသညျဒုတိယလှိုင်းလုံးအကွောငျးပွောလိမျ့မညျ - နောက်အိမ်ထောင်ပြုရန်တစ်လှိုင်း။ တူညီသောလူအတူညီအသင်းတော်၌ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု၌အသစ်သောမိတ်ဖက်နှင့်အတူယခုထိုင်နေကြတယ်။ ခရစ်ယာန်ပထမဦးဆုံးလှိုင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်အနိမ့်အဆင်သင့်တာပေါ့နှင့်အခြား။ "End quote ဘို့ပင်လျော့နည်းပြင်ဆင်ထားခဲ့သည်။
အခုဆိုရင်ထရပ်များနှင့်လက်ထပ်ထိမ်းမြားပျေါတှငျ, မာရ်နတ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခုခံတွန်းလှန်ဖို့အချိန်ပါ! ဆုံးရှုံးဖို့တစ်နေ့လျှင်မရှိ။ တစ်ဦးကအကြီးအကျယ်မြင့်မားသောဝိညာဉ်ရေးရာအဆင်သင့်ပိုပြီးကွာရှင်းခြင်းကိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်သည်ဟုလည်းရှိ၏။
ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်တော်ရန်နှင့်အချင်းချင်းလွှဲပြောင်းအတွက်, ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌ဆုတောင်းပဌနာ၏နေ့စဉ်ယခုအချိန်တွင်ကို ယူ. , အရေးအပါဆုံးအရာသစ္စာစောင့်သောအိမ်ထောင်ဖက်အတူတကွဆုတောင်းကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။
ထိုအခါသင်မသာလက်ထပ်ထိမ်းမြားတှငျနှစျရှိသျောလညျးသုံးသညျယရှေုခရစျသညျကြှနျုပျတို့၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်ကာကွယ်ဆက်ဆံရေး၏ဗဟိုချက်၌ရှိကြ၏။ သူကအဲဒီမှာစလေိုနှင့်ကဒီလမ်းအတွက်သူတို့ရဲ့အိမ်ထောင်ရေးကိုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤကမျြးစာသက်ဆိုင်သောဒေသနာ 4:12 သည်:
ဆိတ်ညံသောကျော်လွှားနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာ "နှစ်ခုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။ ထိုအခါသုံးခါလိမ်ကြိုးကိုလွယ်ကူသည်မဟုတ်။ "
အတူတူနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရှိသူတို့လက်ထပ်ထိမ်းမြားအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိသည်သောအတည်ပြုရန်ကြောင်းလေ့လာမှုတွေကလည်းရှိပါတယ်။ ထိုသို့သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်စ​​စ်တမ်းပြုနှင့်အတူတကွဆုတောင်းပဌနာသူကိုဦးတည်သွားစုံတွဲများအောက်တွင်ထုတ်ဝေအတူတကွနေထိုင်ရန်, ဖော်ပြထားသည့်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်
"ရလဒ်တစ်ခုမှာရှင်းပါတယ်, စုံတွဲများအိမ်တွင်ထိုကဲ့သို့သောဆုတောင်းခြင်းနှင့်ကျမ်းစာလေ့လာမှုအဖြစ်လှုပ်ရှားမှုများမတ်ေတာရှိသောဆက်ဆံရေးရှိသည်ဖို့ပိုများပါတယ်ပြီဖြစ်၏။ "
ဆုတောင်းပဌနာ - တစ်ဦးလက်ထပ်ထိမ်းမြားအတှကျအကောငျးဆုံးအာမခံ။